निजीकृत खोजको साथ तपाईको साइटको रैंक जाँच गर्दै Martech Zone
निजीकृत खोजीको साथ तपाईको साइटको रैंक जाँच गर्दै
बुधबार, डिसेम्बर 16, 2009 शुक्रबार, फेब्रुअरी 10, 2017 Douglas Karr
मेरो ग्राहकहरु मध्ये एक गत हप्ता बोलाइयो र किन उनले सोधी, जब उनको साइट रैंकि in मा पहिलो थियो तर अर्को व्यक्ति उसको पृष्ठ तल एक सानो थियो। यदि तपाईंले रकस सुनेको थिएन भने, गुगलले निजीकृत खोजी खोल्‍यो परिणामहरू स्थायी रूपमा।
यसको मतलब यो हो कि तपाईंको खोजी ईतिहासमा आधारित, तपाईंको नतिजाहरू भिन्न हुनेछन्। यदि तपाईं आफ्नै साइटहरूको स्तर जाँच गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले सायद फेला पार्नुहुनेछ कि ती सबैमा सुधार भएको छ। यद्यपि, तिनीहरू सायद तपाईको लागि सुधारिएको थियो र अरू कोही पनि छैन। तपाईको रँकलाई साँच्चिकै जाँच गर्न तपाईले ब्यक्तिगत खोजी परिणामहरू बन्द गर्नुपर्नेछ।
निजीकृत खोजीलाई बन्द गर्न तीन तरिकाहरू छन्:
यो अस्थायी रूपमा सुनिश्चित गर्नका लागि तपाईले लग ईन गर्नुभएको गुगल अनुप्रयोगबाट लग आउट गर्नुहोस्। थप उपायको रूपमा तपाईको ब्राउजरमा निजी ब्राउजिंग खोल्नुहोस् (सबै हालसालैको ब्राउजर रिलीजमा यो छ .. आईईको लागि तपाई आईई on मा हुनुपर्दछ)।
गुगलबाट कुनै कुकीहरू हटाउनुहोस्। यसले मूल रूपमा तपाइँलाई लग आउट गर्दछ जहाँ खोजी निजीकृत छैन। फेरि, निजी ब्राउजिङ सफारीमा, फायरफक्स वा आईई को समान प्रभावहरू हुनुपर्दछ। गुगल क्रोममा, सुविधा भनिन्छ इन्कग्निटो ब्राउजि।.
स्थायी रूपमा तपाईको ईतिहास हटाउनका लागि तपाईमा लग ईन गर्नुहोस् गुगल वेब खोज ईतिहास र असक्षम गर्नुहोस्। मेरो खातामा जानुहोस् र मेरो उत्पादनहरूको छेउमा सम्पादन क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् वेब ईतिहास स्थायी रूपमा मेटाउनुहोस्। जब तपाईको ईतिहास मेटिन्छ, तपाईको खोज परिणामहरुलाई निजीकृत गर्न को लागी कुनै साधन छैन। तपाईंले प्राय: यो गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
यदि तपाईं आफैंमा यसलाई सजिलो बनाउन चाहानुहुन्छ भने, म स्विच गर्न सिफारिश गर्दछु (विडंबना) गुगल क्रोम। तपाईं इन्कग्निटो विन्डो खोल्न सक्नुहुनेछ (ctrl-shift-N) र यसले तपाईंको खोज ईतिहास पहुँच गर्दैन वा कुकीहरू सेट गर्दैन ... तपाईं एक विन्डोमा गुगलमा लग इन रहन र नयाँ विन्डोमा इन्कग्निटोमा सक्षम रहनुहुनेछ। यसैले मैले माथि स्क्रिनसट लिएँ ... बाँयामा निजीकृत र एक गुप्त विन्डोमा दायाँ निजीकृत छैन।
गुगल क्रोम को फाइदा यो हो कि निजी ब्राउजिङ अन्य ब्राउजरहरूका सुविधाहरूले सबै विन्डोजहरूलाई निजी बनाउँदछन्। तपाईसँग केहि छैन जुन केहि छ र जे छैन। यो सहज बनाउन Chrome ले राम्रो काम गरेको छ।
दिमागमा राख्नुहोस् कि यसले अझै पूर्ण शुद्धता प्रदान गर्दैन। तपाईंको उपकरण र तपाईंको स्थान अझै पनी परिणामहरु लाई असर गर्छ। तपाइँको स्तर निर्धारण मा एक सच्चा नजर को लागी, तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ गुगल खोज कन्सोल र म तपाईलाई सदस्यता लिन अत्यधिक सिफारिश गर्दछु Semrush.
टैग: र्याकिंग जाँच गर्दैइन्कग्निटोकुञ्जी शब्द श्रेणीकरणकुञ्जी शब्द श्रेणीकरणनिजीकृत खोजीर्याङ्किङ्गखोज ईन्जिन परिणाम पृष्ठखोज इञ्जिन परिणाम पृष्ठ रैंकिंगserpसर्प रैंकिंग
के तपाई हात्ती हुनुहुन्छ वा पुतली?
तपाईंको ग्राहकहरूको साथ
डिसे 17, 2009 मा 8: 48 AM
डग, बधाई! तपाई पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ the स्पष्ट than बाहेक आईकग्नटो ब्राउजि forको लागि प्रयोगको सिफारिश गर्न
डिसेम्बर १, २०१ 17 2009:२:6 अपराह्न
के इन्कग्निटोले विज्ञापनको रूपमा राम्रो काम गर्दछ?
(र किन म टिप्पणी दिन मेरो WordPress आईडी प्रयोग गर्न सक्दिन?)
जनवरी १, २०१7१२::2010 अपराह्न
यो ती मध्ये एक साधारण पोस्ट मात्र हो जुन मेरो टाउकोमा टाँसियो। त्यसो भए, आज जब मलाई यो जानकारीको आवश्यक पर्‍यो, यो सिकार गर्न र सिक्नको लागि यो सजिलो थियो। तपाईंलाई धन्यबाद, मैले क्रोम डाउनलोड गरें र इन्कग्निटो पृष्ठहरू प्रयोग गर्‍यो केही खोजहरूको परीक्षण गर्नका लागि। धन्यवाद!